Fifandraisana ara-pianakaviana (1)
Naseho ny : 11 jona 2021
Ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana no rohy maha mpihavana. Manana ny lanjany ny fihavanana ary notandroina fatratra teo amin'ny Malagasy. Ny fihavanana dia nahafahana nandrindra fiaraha-monina sy disadisa, ambony lavitra noho ny vola sy ny voninahitra. Katesizy momba ny fianakaviana iarahana amin'i P. Randriamanamahenina Robert Maria...
Ny finoana no fototry ny fianakaviana (15)
Ny finoana dia ny fitokisana an’Andriamanitra tanteraka. Mampijoro ny fiandrianam-pianakaviana ny finoana an’Andriamanitra. Ny antsoina hoe : tokatrano kristianina dia ny ray sy ny reny ary ny zanaka resy lahatra amin’ny herin’ny sakramenta izay raisiny ka mitandro izany ho ampinga enti-miady amin’ny ratsy sy mijoro ho vavolombelon’ny finoany eo amin’ny fiainany andavanandro. Katesizy momba ny fianakaviana iarahana amin’i P. Randriamanamahenina Robert Maria
Ny finoana no fototry ny fianakaviana (14)
Raha fototry ny tokatrano ny finoana an’Andriamanitra dia mila miankina amin’Andriamanitra ny olona mamorona izany tokatrano izany. Mijoro araka ny sitrapon’Andriamanitra ny tokatrano iray rehefa miaina ny finoana Azy ny ray sy ny reny ary ny zanaka. Katesizy momba ny fianakaviana iarahana amin’i P. Randriamanamahenina Robert Maria
Ny finoana no fototry ny fianakaviana (13)
Naseho ny : 29 avrily 2021
Ilaina ny manokana fotoana indraindray mba hanaovana loabary an-dasy ka manao tombana ny fiainam-pianakaviana. Ilaina koa anefa indraindray ny mangina ao an-trano ao mba hahafahana miresaka amin’Andriamanitra bebe kokoa. Katesizy momba ny fianakaviana iarahana amin’i P. Randriamanamahenina Robert Maria
Pejy 43 amin'ny 52